Jungle Ruuxa Jungle Ruuxa
Ayaa ciyaarto ciyaarta Afyare a sameeyay aad dareento sida aad tahay boqorkii reer kaymaha? Well, naadi, kuwaas oo sii wixii aad ku guulaysato ciyaarta UK ku siinayaa dhab ahaan nooca in oo waayo aragnimo ah. Jungle Ruuxa: Call of Wild waa maya kaftan laakiin kaynta ku yaal oo la khasnadaha ku filan in aad ku guuleysan karto. Iyada oo hawdka ah degan laakiin qoto dheer oo mugdi ah ee asalka ah, kulankaan waa wax ka yar hal danbayntii of tuurnimo. Waxaa in ka yeela aad waayo-aragnimo ciyaaraha ka mid ah dhehay waa xayawaanka duurjoogta ah kuwa xajiya duwanyihiin aad ee la sanqadha, iyo cadho. farabadan A of fireflies xajiya duulaya guud ahaan shaashadda u eg gabi ahaanba sixir.
About sameeysa Ruuxa Jungle: Call of Wild ah :
sameeysa waa NetEnt waa kuwa caan ah oo abuuraya kulan Afyare la mawduucyada breathtaking iyo naqshadeynta maanka-kacday, si ay usoo jiitaan maskaxdaada. Waxa ay qaar ka mid ah boosaska ugu fiican hayn waxa aad ku guuleysan kulan UK in aad ku raaxaysan kartaa online iyo guuleysan qaar ka mid ah abaal weyn ka dhigi kartaa in aad taajir.
Dhigay hortegi lahaa ee dhexe ee kaynta ku yaal oo cufan, waxaad ka arki kartaa, naadi uu diidanaa qaar ka mid ah calaamadaha la yaab leh in aad sii jiitay. Waxaa jira shan calaamadaha-qiimaha sare ee boosaska dhawrtaan waxa aad ku guulaysato ciyaarta UK; shabeel, Yaxaas, jilbiska, dhali iyo maroodiga ay la socdaan kaararka ka ciyaaro 10 si A. Shabeel waxaa ugu sarreeya lagu qiimeeyo ee dhan shan iyaga ka mid ah oo ku saabsan payline ah in aad abaalmarino 150 jeer aad saamiga. Kulankaan ayaa dalabyo 1024 siyaabo inuu ku guuleysto iyadoo muuqaalada gunno la yaab leh sida ballaarinta calaamad, boost balanbaalis oo kala firdhiso.
astaanta Expansion: Sida magacaba ka muuqata dhammaan calaamadaha ciyaarta ku kala firdhi, marka laga reebo ka heli ballaadhiyey duntu ay ka soo jeedaan. Tani waxay dhacdaa marka calaamad kasta oo la balanbaalis a iftiimay waxa on muuqataa oo ay la socdaan wax kasta oo isku dhafan guuleystay. Astaanta balanbaalis ku dahaadhay ka dibna u fidiya in ay ku ambadeen dhan samaynta guuleystayna aad u weyn oo wanaagsan. Suurtagalnimada halkan waxaa ku jira ayaa laga yaabaa in ka badan hal calaamad in fidin karaan iyo markii shan calaamadaha Shabeel sida ballaariyo oo dhan wada, aad ku guulaysato 1024 jeer aad saamiga.
kala firdhiso: In naadi dhawrtaan waxa aad ku guuleysan UK calaamad kala firdhiso waxaa matalaya ubax hooska ah iyo saddex ama in ka badan oo ka mid ah kartaan abaalmarinta aad dhigeeysa free. Haddii aad hesho 4 ama 5 dhigeeysa ka dibna aad ku guuleysan karo 15 ama 50 jeer aad saamiga lagu daro dhigeeysa free. Waayo, tirada dhigeeysa free, run ahaantii aad ka heli in aad doorato in aad naftaada iyo waxaad dooran kartaa 4, 8, 12, 16 ama 20 dhigeeysa. Tiro yar dhigeeysa aad u helo guul qiimaha sare, halka 20 dhigeeysa kaliya idin siin doonaa qadar yar oo ku guuleystay.
Summary: naadi Kuwani sii wixii aad ku guulaysato ciyaarta UK waxay bixisaa tirada ugu badan ee fursadaha ahee iyo guul super ahee in aad ku guuleysan karto kun oo pounds in lacag. bet ugu yar ee kulankaan waa 20p iyo ugu badnaan £ 100 halkii Lataliyihii.